Fanentanana fanorenana ny Fiangonana Ambohimanjaka - Komity AFF - FJKM Tranovato Ambatonakanga
Fanentanana fanorenana ny Fiangonana Ambohimanjaka
6 février 2014 30 juillet 2018
Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana,
Amin’izao fiandohan’ny taona izao, isaorana indrindra Andriamanitra ary tolorana fankasitrahana feno koa ny Fiangonana manontolo tarihin’ny Raiamandreny Mpitandrina − ao anatin’izany ny sampana sy ny fikambanana ary ny kristiana tsirairay − noho ireo ezaka vita mikasika ny fanorenana ny Fiangonana (olona sy trano) any Ambohimanjaka. Misaotra anareo rehetra nanaiky ho fitaovana teo ampelatan’ Andriamanitra ka niasa ho amin’ny fampandrosoana ny Fanjakany. Nasehonareo tokoa ny maha-iray antsika ao amin’ny Tompo.
“Izy anie hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin’ny voninahitra no amin’i Kristy Jesosy” (Fil 4:19)
Tatitra fohy ny mikasika ny zava-bitantsika tamin’ny taona 2013
Vita tanteraka ny fototra vato mirefy 11m X 27m.
Vita ny biriky 9 000.isa fa miato aloha ny fananganana ny trano noho ny orana.
Nitombo isa ny Kristiana tao amin’ny FJKM Ambohimanjaka tamin’ny voalohany
(2012 : 6 isa, volana desambra 2013 nitombo ho 60 isa.
Nisy iraka, isam-bolana, avy amin’ny Komity AFF eto Ambatonakanga manao fampianaram-pinoana sy manaraka ny fivoaran’ny fiainam-panahy sy ny asa fanorenana ny trano fiangonana any Ambohimanjaka
Ny lafiny ara-bola dia azo fintinina amin’ity tabilao manaraka ity
Vola voaray (Ariary)
Vola nampiasaina (Ariary)
Vola voaangona ho an’Ambohimanjaka : Fanomezana, rakipisaorana ho an’Ambohimanjaka, varotra, valopy anjara biriky
2 931 500 Ar
Vidin’ny fitaovana, karaman’ny mpiasa, saran-dàlana nankany Ambohimanjaka
4 578 600 Ar
Elanelana nofenoina avy amin’ny tahiry AFF : rakitra fahatelo, rakipisaorana AFF
1 647 100 Ar
Raha sitrapon’ny Tompo, dia hamita tanteraka ny rindrina 6m, izay mitentina 30 000 000 Ariary, isika miaraka amin-dry zareo ao Ambohimanjaka.
Ny antsipirian’ny teti-bola ary ny fitaovana mbola ilaina momba izany (biriky, fasika, simenitra, fers ronds, ….) dia ho hitantsika eto aoriana kely.
Ahazoana manatanteraka izany, dia kitapon-drakitra no hataontsika. Ka ny fahafoizana sy ny fanomezana araka ny fahasoavana nomen’Andriamanitra antsika no hanaovantsika azy. Hoy mantsy ny soratra masina :
“Misy mahafoy, nefa mitombo fananana ihany; Ary misy fatra-pahihitra loatra, nefa tonga malahelo ihany.” (Oh 11.24).
Toy izao no hanatanterahantsika izany
– Ho zaraina isan-tokantrano na isan’olona, araka izay mety amintsika, manomboka ny alahady fandraisana volana febroary (02 febroary 2014) ny kitapon-drakitra efa misy laharana sy karatra. Mandrotsaka ao isika manome ny ajaran’ny Tompo,araka izay hafaliam-pontsika sy izay hitarihan’ny Fanahy Masina antsika, mety ho isan’andro na isan-kerinandro, ….
– Ny fanangonana ireo kitapon-drakitra atao indimy miantoana : ny alahadin’ny Paska (20 aprily 2014), ny alahadin’ny Pentekosta (8 jona 2014), ny 27 jolay 2014, 5 oktobra 2014 ary ny alahady 7 desambra 2014. Ka ialohavan’ny fanentanana 2 herinandro mialoha ho fampahatsiahivana. Marihina fa hisy hatrany tatitra aorian’ny fanangonana azy.
Efa misy karatra kely ao anatiny ao, ho fanamarihantsika izay voaangontsika mialoha ny androtsahana azy (toy ny fanao amin’ny karatra adidy ihany).
Ezaka lehibe ho antsika ry havana io napetraka io. Ny fiara-mientantsika rehetra eo ambany fahasoavana sy fitarihan’ny Fanahy Masina no inoanay fa hahatontosantsika izany ho Voninahitr’Andriamanitra irery ihany.
”Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy” amin’ny asa fitoriana sy fanorenana any Ambohimanjaka.
Miandry anao ny Tompo